Archive du 20181214
Madagasikara Mila filoha matotra
Mila filoha matotra sy voky traikefa i Madagasikara satria efa tena latsaka an-katerena ny firenena.
Fijerena ny lisi-pifidianana Maro ireo olona tonga eny amin’ny fokontany
Afaka herinandro sisa dia hiatrika ny fifidianana fihodinana faharoa amin’izay ho filoham-pirenena hitantana an’i Madagasikara isika.
Vahoakan’ny Boriborintany faha-6 teny Ambodihady Nihaino ny toromarika avy amin’i Dada nentin’i Neny
Rakotra vahoaka tao Ambodihady Ambohimanarina (Rizerie Nenitoa Viky) omaly alakamisy 13 desambra 2018 nihaino sy nitafa tamin’i Neny Lalao Ravalomanana izay nisolotena ny Kandida n°25 ary notronin’ny depiote TIM 6è, Rasoanoromalala Horace,
Miketrika ny mpangala-bato Mila fahamailoana goavana
Tsy kely lalana ny ratsy ary tena misy ny kajikajy maloto amin’ny fifidianana ka mila fahamailoana goavana. Mila mailo ny rehetra amin’ny fanaraha-maso ny latsa-bato, ny fanisam-bato.
Taratasin’i Jean Veloma ry Saidomara !!
Hay ve ianao efa mahafantatra fa mody fanina fotsiny ry Jean e ? Hitako no tsy hitahita intsony. Efa notenenina kay, hono, ianao hoe tsy lasa intsony ity revin-gadra ity.
Krizy nanova toe-tsaina
Maro ny krizy politika nandalovan`ny firenena tao anatin`ny 58 taona nahazoantsika ny fahaleovantena ka izany no isan`ny tena nanapotika toetsain`ny Malagasy.
Manampahaizana momba ny harena ankibon’ny tany Tsy ampy be dia be, hoy ny tale jeneralin’ny ISGIE
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny IKM Antsahavola omaly ireo mpianatra mpikaroka momba ny harena ankibon’ny tany miisa 27 mianadahy avy eo anivon’ny sekoly ambony ISGIE.
Minisitry ny fitantanam-bola sy ny tetibola Tombony ny azo amin’ny “contrôle après dédouanement”
Tsy misy fatiantoka ho an’ny sehatra tsy miankina, indrindra ny mpandraharaha, ny fanaraha-maso aorian’ny fandoavana fadin-tseranana (contrôle après dédouanement).
Nanao jery todika momba ny politika nasionalin’ny fampananana asa sy fampiofanana arakasa tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ireo mpisehatra ao amin’izany ao amin’ny minisitera.
FITANDROANA NY FILAMINANA
izy. Olona efa feno rà sy miady amin’ny fahafatesana no noraisin’ny mpitsabo ary natao avy hatrany izay rehetra nitazomana ny ainy.
Tonga nanohina ny hetsik’ireo mpitondra fiarakaretsaka tetsy Ambohijatovo omaly ny avy eo anivon’ny hetsika manohitra ny fiakaran’ny vidim-piainana na MCI. Aleo, hoy izy ireo, omena izay afaka manavotra ny toekarena ny fahefana.
Mpangataka sy mpatory an-dalana Mitombo andro aman’alina, misy ireo tsy tia fehezina
Mitombo isa andro aman’alina ireo mpangataka sy mpatory an-dalana eto an-drenivohitra ankehitriny. Ho an’iretsy voalohany dia ankizy madinika ny ankamaroan’izy ireo izay efa mahatratra 2.000 eto an-drenivohitra.
Boriborintany faha-2 Afa-pahasahiranana ireo mpanasa lamba
Afa-pahasahiranana ireo mpanasa lamba ao amin’ny fokontanin’i Manakambahiny sy Ambatomaro ary Ankerakely sy Ambohipotsy Amparihy amin’ny boriborintany faha-2 ankehitriny fa natolotry ny depiote Rastany avy amin’ny antoko TIM sy Atoa Sedera
Fitantanana ny fako eto an-drenivohitra Tsy maintsy nitady vahaolana hafa ny kaominina
Toe-javatra iray misy manararaotra ho fitaovana politika amin’izao fotoana izao ny fitantanana ny fako eto Antananarivo. Io moa izay voamarika hatrany fa natao hosahanin’ny avy eo anivon’ny sampandraharaha mahaleotena misahana izany eo ambany fiadidian’ny minisiteran’ny rano na ny SAMVA.
Mpiasan’ny orinasa SIRAMA Brickaville “5% monja ny tombantomban’asa mba vitan’ny kaompania VIDZAR”
Nanatanteraka fihetsiketsehana ny mpiasan’ny SIRAMA Brickaville nanomboka ny 11 desambra lasa teo.